“Waaba Guul haddii ay Man United AFARTA sare ka soo mid noqoto xilli ciyaareedkan”.- – Gool FM
“Waaba Guul haddii ay Man United AFARTA sare ka soo mid noqoto xilli ciyaareedkan”.-
Byare August 19, 2018
(London) 19 Agoosto 2018. Jose Mourinho ayaa sheegay in Manchester United ay dhabtii ku adkaan doonto xilli ciyaaredkan inay soo gasho kaalinta afaraad iskaba dhaafe inay qaado koobka Premier League.
Kooxda ka arrimisa Old Trafford ayaa kaalinta labaad gashay xilli ciyaareedkii tagay, mana aysan ku guuleysan Premier League tan iyo sidii uu uga tagay Sir Alex Ferguson 2013.
Macallinka reer Portugal ayaana sanadkan hoos u dhigay inay horyaalka kula tartami karaan kooxda Pep Guardiola isla markaana ayba guul tahay haddii ay ka soo mid noqdaan afarta sare.
“Waan isku dayi donnaa, laakiin dhabtii waa shaqo adag oo na hor taala, kaalinta labaad ee sanadkii hore dhabtii aad ayay u adkeyd. Sanadkaana koox kasta ayay ku adkaan doontaa inay ku dhammeysato afarta sare, ” Jose ayaa sidaa yiri.
“Liverpool waxay isku dayayaan inay ku guuleystaan Premier League kaddib maalgalintooda cajiibka ah. Chelsea waxay heysataa shax cajiib ah, sidoo kale Manchester City waxay heysataa shax cajiib ah, Tottenhma waxay sameysay maal galin aan innaba caadi ahayn taa oo ah inay ilaashatay ciyaartoydeeda, taasi waa maal galinta ugu fiican aad sameyn karto.
“Waxay qarash gareyn kareen 200 milyan oo bound, laakiin haddii ay lumiyaan Harry Kane ama Christian Eriksen… Maal galinta ugu wayn waxay ahayd inay ilaashato dhammaan ciyaartoydeeda. Arsenal way fiicnaan doontaa inkastoo ay guul darreysatay kulamadeedii hore. Waxaan aaminsanahay in kal ciyaareedkan uu noqon doono mid aad u adag.”.
Wareysigan ayuu Mourinho bixiyay ka hor ciyaartii ay iminka guul darada 3-2 kala kulmeen kooxda yar ee Brighton & Hove Albion.
“Sergio Aguero wuxuu ku gudi jiraa waqtigiisii ugu fiicnaa”… Guardiola oo fariin u diray kooxaha Premier League